ဇာထိုးရန်သင်ယူရန်လက်မှုပညာ | လက်မှုပညာ
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, ထည်နှင့်အတူလက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီယာဉ်မှာငါတို့နှစ်ခုတွေ့မယ် ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ရန်သင်ယူရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုသောလက်မှုပညာ ရေချိုးခန်းဖျာများ၊ ကူရှင်များ၊ စောင်များစသောအရာအချို့ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။
1 ဇာထိုးရန်သင်ယူရန်ပထမယာဉ်: ချုပ်ရန်သင်ရန်ငါး။
2 ရက်လုပ်ခြင်းကိုလေ့လာရန်ဒုတိယယာဉ်: ကတ်ထူပြားနှင့်လွယ်ကူစွာရက်ကန်းသည်။
ဒီယာဉ်သာမဟုတ်ပါဘူး မည်သည့်အသက်အရွယ်ကိုမဆိုလေ့လာသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ယက်လုပ်ခြင်းသင်ပြီးတာနဲ့ဒီယာဉ်ကိုသုံးနိုင်တယ် ပုံစံကိုဖန်တီးပါ ငါတို့ကရက်လုပ်ချင်တယ်၊ ငါတို့ကြိုက်တယ်၊ မကြည့်ဘူးလား၊ ပြီးတော့ထည်ထဲယက်နေချိန်မှာငါတို့ရှေ့မှာမော်ဒယ်ရှိတယ်။ ထည်ဖြင့်ရက်ကန်းလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နံပါတ် ၂ ရှိသည်။
Thread အမျိုးအစားနှစ်မျိုး (Weft နှင့် Warp) မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပထမယာဉ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒီအိမ်လုပ်ရက်ကန်းကရက်လုပ်ပြီးစတင်ယက်ပါ။ ရိုးရှင်းသောရက်လုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ရန်နှင့်အခြားပုံစံများကိုတဖြည်းဖြည်းပြုလုပ်ရန်နှင့်မတူညီသောအထည်များပြုလုပ်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဆိုပါစံပြဖြစ် အထူချည်နှင့်စတင်ပါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ယက္ကန်းယက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုးမွှေး၊ ထည်စသည့်အခြားချည်များသို့မဟုတ်ပိတ်ထည်များကိုသုံးနိုင်သည်။
ထိုအဆင်သင့်! ဤလက်မှုပညာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် စတင်၍ အ ၀ တ်အထည်များပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး၊ ၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ပိုင်းတွင်အဝတ်အထည်များသို့မဟုတ်အခြားအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ဇာထိုးရန်သင်ယူဖို့လက်မှုပညာ
ကျဆုံးခြင်းအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး Pretty ကုလားကာညှပ်